Egwuregwu ping ping 6 kacha mma gam akporo | Gam akporosis
Aaron Rivas | | Ngwa gam akporo, Egwuregwu gam akporo
Ping pong bụ otu n’ime okpokoro egwuregwu ndị kacha ewu ewu n’ụwa, ya mere ọ bụkwa otu n’ime egwuregwu kachasị egwu. Ma obu na ichoro tebulu puru iche, ufodu uzo ma obu okpokoro tennis - nke bu aha ozo eji mara nwoke. table iri- na ụfọdụ bọọlụ. Na nke ahụ, ị ​​nwere ike igwu egwu na-erughị ndị egwuregwu abụọ. Agbanyeghị, enwere ike igwu ya na mkpanaka, ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị mkpokọta a.
Anyị depụtara usoro Egwuregwu ping ping 6 kachasị mma maka gam akporo, ka i wee nweta nke kasị amasị gị. Ha niile bụ n'efu ma dị na Storelọ Ahịa Play. Na mgbakwunye, ha bụ ndị nwere aha kacha mma, n'otu oge na ha bụkwa otu n'ime ibudatara ma kpọọ.
Nke a bụ a chịkọtara nke 6 kacha mma ping pong egwuregwu n'ihi na gam akporo mobiles. Okwesiri igosiputa ozo, dika anyi na eme, na Egwuregwu niile ị ga-ahụ na nchịkọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n'ime, nke ga-enye ohere ịnweta ọdịnaya ndị ọzọ n'ime ha, yana atụmatụ adịchaghị, enyemaka, onyinye, ụgwọ ọrụ na ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Abụ m Ping Pong King 🙂
2 Isiokwu tenis onye mmeri
3 3D okpokoro tenis
4 Pongfinity - Ping Pong enweghi ngwụcha
5 World Isiokwu Tenis Champs
6 Tebụl Tenis Virtual
Abụ m Ping Pong King 🙂
Anyị na-amalite ndepụta a na m Ping Pong King, isiokwu na-adọrọ mmasị nke ị ga-eche ihu iri na isii wee tie ha aka ka ha bụrụ eze nke tebụl tebụl. Ọ nwere eserese dị mfe, mana ọ bụ ihe pụrụ iche, enwere ike iji otu aka kpọọ ya. Nanị ị ga-eme ka agwa gaa otu akụkụ gaa na akụkụ ọzọ, na-anwa iweghachite bọl ma mee ka onye iro ahụ tufuo.
Ndi ndorondoro di nma. N'ezie, na mbụ ha ga-adịtụ mfe imeri, mana mgbe ahụ ị ga-ahụ otu ihe si sie ike. Onye ọ bụla nwere ikike dị iche iche nke nwere ike ime ka ị ghara idafu; ihe a na-eme bụ ịkụ bọl azụ mgbe niile. Isi ihe ọ bụla emezuru na-eme ka ị bịaruo nso nke ikpeazụ.
Na egwuregwu a ị nwere ike ọ bụghị naanị igwu egwu ping pong na ụzọ ntụrụndụ na ọchị. I nwekwara ike melite mmeghachi omume na mmeghachi omume mmeghachi omume, nke na-enyere gị aka melite na ezigbo egwuregwu. N’aka nke ya, onye mmachi, onye bu agwa egwuru-egwu a, nwere agba egwu di iche na ihe egwu di egwu nke n’agaghi agha gi n’oge obula.
Isiokwu tenis onye mmeri
Egwuregwu ọzọ ping pong dị mma bụ Tebụl Tenis onye mmeri, nke nwere ezigbo eserese eserese, mmegharị ọfụma mara mma, yana egwu egwu dị mma. Edepụtara aha a dị ka otu n'ime ụdị ndị kachasị mma, ọ bụghị n'efu ka ọ na-etu ọnụ maka nkwanye ugwu 4.1 dị egwu na Storelọ Ahịa Play na ihe karịrị 100 echiche ziri ezi.
Egwuregwu a na-etu ọnụ maka eserese dị mfe, ma ọ dị ezigbo mma 3D, na ike na-agbanwe agbanwe. N'okwu a, Ọ na-akpọ horizontally na ị dị nnọọ nwere slide mkpịsị aka gị see bọl. Ga-enwerịrị ọtụtụ egwuregwu, nke ọ bụla siri ike karịa nke ọzọ yana usoro na nka dị iche iche nwere ike gbanwee site na egwuregwu dị mfe gaa na nke siri ike n'ihe gbasara naanị ọkwa ole na ole. Zụọnụ onwe gị dị ka onye ọkpụkpọ ping kacha mma.
E nwere ihe karịrị 50 ndapụta nke ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọkpụkpọ nwere nkà. Bụrụ onye mmeri na nke ọ bụla n'ime ihe ndị a ma ghara imere ndị na-emegide gị ebere. E nwekwara asọmpi egwuregwu tennis mba ụwa nke ị ga - apụta. Ọzọkwa, ị nwere ike iru otu ping pong gị wee kpọọ egwuregwu ndị ọzọ nwere nka
3D okpokoro tenis
Dị ka aha ya na-egosi, 3D Isiokwu Tenis bụ egwuregwu nwere ezigbo ndịna-emeputa na XNUMXD oyiyi. Egwuregwu a dịkwa mfe, mana ọ naghị akwụsị ịbụ otu kachasị ebudatara, nyere ikike na-atọ ụtọ ọ na-eweta.
Gwuo na egwuregwu tennis nke mba ụwa, nke ị nwere ike ịhọrọ obodo ị ga-achọ ịnọchite anya ya kachasị, ma gosipụta ihe emere gị, soro ọtụtụ ndị egwuregwu na-asọ mpi, ha niile nwere nnukwu nka na-eme ka o sie ike iti ha egwu n’egwuregwu. Ọ bụrụ na ị bụghị aka ochie na iji mkpịsị aka gị kụọ bọọlụ wee laghachi onye iro ahụ, zụọ ma ghọọ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma tupu ịnye ezigbo ọgụ.
N'aka nke ọzọ, egwuregwu a nwere nnukwu asọmpi gụnyere asọmpi ụwa na asọmpi ping pong enyi na ọkaibe, ya mere inwere ike iwere okpueze ma puta dika eze nke okpokoro. E nwekwara a Ọrụ mode, nke mejupụtara ọkwá na a leaderboard nke ị ga-agbalị ịbụ onye mbụ. N'otu oge ahụ, ịnwere ike ịmeghe ihe ọhụrụ, dị ka usoro egwuregwu dị iche iche, ma kwụsị ịkpọ ping pong.
Developer: Egwuregwu Giraffe Limited
Pongfinity - Ping Pong enweghi ngwụcha
Pongfinity bụ egwuregwu pụrụ iche n'ọtụtụ echiche, mana karịa n'otu, ọ bụkwa ihe ndị a: enweghị njedebe, dịka aha ya pụtara. Ma ọ bụ na egwuregwu a na-enwu gbaa maka ịdị mfe ya na ezigbo ike ya, nke ị ga-emetụ aka ịkwaga site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ wee slide kụrụ bọọlụ wee laghachi ya na ndorondoro.
Egwuregwu egwuregwu tennis a maka gam akporo kwa Ọ nwere ebe na ndapụta nke ị ga-egwu ma gụnye isiokwu nke ugwu mgbawa, oke ọhịa na ọtụtụ ndị ọzọ, ihe na - eme ka ọ ghara ịdị egwu n'oge ọ bụla ma ọ dịghị ihe ga - agwụ gị ike n'ụwa.
Can nwere ike nweta nkwalite gị otu ịghọ-apụghị imeri emeri na okpueze onwe gị dị ka ndị kasị mma ping pong ọkpụkpọ na egwuregwu a na-enweta ọtụtụ jụụ ihe na-egwu na. Na mgbakwunye, o nwere ọmarịcha agwa dịka Emil, Miikka na Otto, ndị gị na ha nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche ma mezue nsogbu dị iche iche nke tebụl. Ihe ọzọ bụ na ị nwere ike isonye na ogo ụwa, site na nke ị nwere ike igosi ihe ejiri me gị.
Egwuregwu a atụmatụ minimalist, mfe ma na-ekerekwa eserese. O nwekwara akara ngosi 4.6 na Google Play Store maka gam akporo smartphones, yabụ nke a bụ egwuregwu ping pong ọzọ dị egwu igwu egwu ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Developer: Ihe Ntụrụndụ Linnama
World Isiokwu Tenis Champs
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale egwuregwu ping pong ọzọ mara mma mara mma 3D eserese, onyonyo na eserese, World Table Tennis Champs bụ ezigbo ihe ọzọ. Ma ọ bụ na aha a na-enye ọtụtụ ụdị egwuregwu ị nwere ike ịhọrọ, nke ị ga-enwe ọtụtụ ndị mmegide, nke ọ bụla siri ike ma nwee nkà karịa nke ọzọ, n'ihi ya ị ghaghị ịkwalite site na egwuregwu mbụ ruo mgbe ị ga-ejizi usoro ahụ bụrụ onye a na-apụghị imeri emeri.
Mee ka uche gị dịkwuo mma, ikike mmeghachi omume na ntụgharị uche mgbe ị na-emeghe ogige dị iche iche na ndapụta na 3D (enwere karịa 16 dị). N'aka nke ya, gbagoo na isi mbido iji ruo aha onye mmeri na-enweghị mgbagha. Also nwekwara ụdị egwuregwu dị iche iche na obere egwuregwu iji mee gị obi ụtọ oge niile, nke ị nwere ike iji mụta ma mụọkwa egwuregwu tennis.
Na World Table Tennis Champs ị nwere ike hazie gị raketị ma ọ bụ ping pong paddles ka amasị gị, na agba nke mmasị gị. E nwere ọtụtụ ọdịiche, akụrụngwa na agba ị nwere ike ịhọrọ ime ka raketị gị bụrụ nke kachasị mma na ngosi niile. E wezụga nke ahụ, ịnwere ike ịmeghe ụdị ọhụrụ nke raketị, mana, iji mee nke a, ị ga-enwerịrị egwuregwu ahụ ma merie ndị gị na ya na-azọ.
Buru n'uche na e nwere raketị nwere ikike pụrụ iche nke ga-eme ka egwuregwu gị sie ike, yana ọsọ ọsọ dị elu na mmegharị bọl dị iche iche nke na-agaghị enye ndị na-emegide gị ohere ọ bụla ịlaghachi azụ.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike igwu egwu egwuregwu a na tebụl naanị otu aka, na-eme ka ọ dị mma. Na mgbakwunye, ịnwere ike ịhazi echiche ndị dị nso, nke nkịtị na nke dị anya, ka ihe niile wee gbanwee ka ị chọrọ. I nwekwara ike igwu ma merie ụgwọ ọrụ na ihe nrite n'ime egwuregwu ahụ.
Developer: Multimedia Nextwave
Tebụl Tenis Virtual
Iji mechaa mkpokọta nchịkọta nke ping pong kacha mma ma ọ bụ egwuregwu tennis egwuregwu maka gam akporo, anyị na-ewetara gị Virtual Table Tennis, aha ọzọ ị ga-amasị, ma maka eserese ya na maka ụdị egwuregwu ọ na-etu ọnụ.
Ihe kachasị adọrọ mmasị nke egwuregwu a, ikekwe, bụ nke ahụ Enwere ike igwu ya na ọnọdụ ọtụtụ egwuregwu na orntanetị ma ọ bụ Bluetooth na egwuregwu ndị ọzọ. Ihe ọzọ bụ na ọ nwere ike bụrụ egwuregwu kachasị dị egwu na ndepụta a, n'ihi eserese 3D ya na nkọwapụta zuru oke. Ọ nwere ọtụtụ ụdị egwuregwu dị egwu, raketị dị iche iche ị nwere ike iji bụrụ ọkpọka ping pong kacha mma na ọtụtụ ndị ọzọ.
Developer: Egwuregwu SenseDevil
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu ping ping 6 kachasị mma maka gam akporo